Milkiilayaasha Warbaahinta | NS6.com
Xalka Mulkiilayaasha Warbaahinta
Ka faa'iideyso dhammaan qalabka ay NS6 ku siiso inaad leedahay Milkiilaha Warbaahinta.
Astaamaheena Milkiilayaasha Warbaahinta
NS6 waxaad awoodi doontaa inaad ku maareyso macaamiishaada mustaqbalka, inaad la fal gasho oo aad awoodo inaad ugu xilsaarto goobahaada xayeysiinta si dhakhso leh oo waxtar leh. Waa qalab diirada lagu saaray kaliya suuqaan.
Diiwaangeli meelaha xayaysiinta cusub, cusbooneysii macluumaadkaaga ama tirtir. NS6 nidaamkani waa mid dhakhso badan oo wax ku ool ah; sawirro soo dhig ama ku dheji goobahaada xayeysiinta macaamiishaada.
Macluumaadka waqtiga-dhabta ah
Xogtaada si habsami leh u ilaali oo daruurta ha ku badbaado; waxay u oggolaaneysaa kooxdaada oo dhan inay marin u helaan macluumaadka la cusbooneysiiyay waqtiga dhabta ah, oo ku habboon shirkadaha leh goobaha xayeysiinta ee gobollada kala duwan.
Si dhakhso leh ula xiriir macaamiisha mustaqbalka
Meelahaaga xayeysiinta ah ayaa ka muuqan doona shabakadda NS6 Media Buyers, taas oo kuu oggolaaneysa inaad macaamiisha la xiriirto gobollada kale oo aad si fudud ula xiriiraan heshiisyada. Xiriirka NS6 ayaa si toos ah adiga kula socda, oo aan lahayn dhexdhexaadiyayaal.
Daabac xayaysiintaada Warbaahinta Guriga-ka-baxsan hadda